Dawladii Somaliland (1960) - Wikipedia
26 Juun 1960
• Raacday Koonfur
1 Juulaay 1960
Shillin Geeska Afrika
Dhulka Biritishka ee Somaliland
Dawladii Somaliland ee 1960 () waxay ahayd dawlad da' yar oo jirtay 5 maalmood. Waxayna xuriyada ka qaadaday boqortooyadii Ingiriiska taariikhdu markay ahayd 1960, 26 Juun. Shan maalmood ka dib waxay la midawday Mustamaradii Talyaaniga. Laakiin nasiib daro midawgaasi muu shaqayn sabo badan awgeed. Maantana waxay tahay Jamhuuriyada Somaliland. 1991, 18 May Waxay ka noqotay midawgii hungoobay ee 1960 1dii Juulaay. Ilaa hada wax aqoonsi ah kamay helin beesha caalamka, inkasta oo ay caalamku ogyihiin inaanay shaqo isku lahayn Dawlada Fadaraalka Soomaaliya.
2 Qaadashadii Xoriyada
3 Soo Noqoshadii Dawalada iyo JSL ee imika
1960, Juun 26, Boqortooyadii Ingiriisku waxay xor siisay Maxmiyadii Somaliland ee Ingiriiska. Isla habeenkaa waxa Beerta Xortiyada ee magaalada Hargaysa laga taagay calanka buluuga ee xidigta cad leh; taasoo loola jeeday 5ta Soomaali. Dadkii barigaa noolaa waxa ku waynaa riyo la odhan jiray Soomaaliwayn , oo ay ka door bideen xurriyada iyo dawlada cusub ee u dhalatay. 5 cisho ka dib aya israaceen Koonfur aidaas ayana ku baaba'day dawladii dhalatay, iyadoo la doonayo Soomaaliwayn . Laakiin waa lagu guul daraystay.
26 Juun 1960 waa maalinta Xornimada Somaliland ka qaadatay gumeeystihii Ingiriiska ee ka talin jirey Gobolada Waqooyi Soomaaliya. 26ka Juun 1960kii waxay ahayd maalintii dadka Somaliland ka hoosbaxeen maamulkii British Somaliland, taasi oo horseeday ku dhawaaqitaankii madaxbanaanida Goboladda Koonfurta Soomaaliya ka qaateey maamulkii la odhan jirey Italian Somaliland ee ka talin jirey koonfur. Ugu dambeyn, 1dii Luuliyo 1960kii waxaa midoobey Goboladii Waqooyi iyo Koonfurta Soomaaliya halkaasi oo lagu aasaasay dowladii iyo maamulkii ugu horeeyay gayiga Jamhuuriyadda Soomaaliya.
Soo Noqoshadii Dawalada iyo JSL ee imika
Midawgii hungoobay maalin kadib , ree Somaliland waxay ogaadeen in walaalahooda koonfutu aanay dhab ka ahayn midnimada Soomaaliwayn.
Bishii 12aad ee 1961dii, saraakiil ka soo jeeday Somaliland ayaa ayaa ku tashaday in ay inqlilaab ku kacaan ; maadaama oo hadakoodii uu lumay kaasoo ahaa Soomaaliwayn. Saraakiisani markay 3 magaalo qabsadeen ayaa la fashiliyaay.
1981kii iyo Jabhadii SNM
Siyaasiyiin ka tirsan Somaliland ayaa ku shiray magaalada Landhan ee caasimada Ingiriiska. Shirkan gudihiisa waxa la sameeyay jabhadii SNM oo ujeedaduna ahayd in la xoreeyo Soomaaliland oo la soo celiyo dawladii luntay 60kii. Xarunna waxa looga dhigay magaalada Londhan iyo bariga dalka Itoobiya. 1988kii ayuu takiskii Siyaad Barre xasuuqay magaalooyin badan oo ka tirsan Somaliland. Waxay dagaalo socdaanba , 1991 18 May, ciidamadii SNM waxay gacanta ku dhigeen dhamaan xuduudii 60kii ee Somaliland. Maalintaas ayay soo noqotay dawladii luntay 60kii.Imikana waxa loo yaqaan Jamhuuriyada Somaliland.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Dawladii_Somaliland_(1960)&oldid=210260"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 13 Maarso 2021, marka ee eheed 13:53.